ဂိမ်းစက်များ | တွင်ပျော်ရန် Horror VR ဂိမ်းများ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ကွန်ဆိုးလ်များတွင် ပျော်ရွှင်ရန် Horror VR ဂိမ်းများ
ဒန်နီရယ် Terrasa | 21/11/2021 09:00 | အားကစားပြိုင်ပွဲ
ထိတ်လန့်ဖွယ်အမျိုးအစားကို နှစ်သက်သူများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံများကို ခံစားခဲ့ကြရသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ဗီဒီယိုဂိမ်းများကြောင့် ထိတ်လန့်တကြား အော်ဟစ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခု အသစ်နှင့် အံ့မခန်း ခုန်ပျံကျော်လွှားမှု ထွက်ပေါ်လာသည်- အကြောက်တရားနှင့် အဒရီနယ်လင်းကို အခြားအဆင့်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်- virtual reality။ ဒီမှာ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင် အကောင်းဆုံး ထိတ်လန့်စရာ VR ဂိမ်းများ.
သတိပေးစကားတစ်ခွန်း- ဤ VR ဂိမ်းများသည် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက ချဲ့ကားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားချက်များ VR နည်းပညာ ၎င်းတို့သည် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အမှန်အတိုင်း လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိတ်လန့်စရာ VR ဂိမ်းများသည် ဂန္တဝင် မျက်နှာပြင်ပြားဂိမ်းများထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းပါသည်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အောက်မှာ တင်ပြထားပါတယ်။ အပြင်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး virtual reality ဂိမ်းများစာရင်း လောလောဆယ်။ စာရင်းအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် မစုံလင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထက်ပို၍ လွတ်သွားသူများနှင့် ရွေးချယ်ခံရသူအားလုံး (စုစုပေါင်း ရှစ်ယောက်) သည် ထိုနေရာတွင် မထိုက်တန်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အကောင်း-အဆိုး အချိန်များစွာပေးစွမ်းနိုင်သော ကောက်ကျစ်သော စွမ်းရည်ရှိကြသည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပေ။ မင်း သူတို့ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သတ္တိရှိလား။
1 လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှုပ်ရှားမှု: The Lost Soul
2 ဂြိုလ်သား: အထီးကျန်ထားခြင်း
4 ကျူးကျော်သူများ - ဝှက်။ ရှာပါ
7 Walking Dead - သူတော်စင်များနှင့် အပြစ်သားများ
8 အရုဏ်အထိ: သွေး၏ Rush
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှုပ်ရှားမှု: The Lost Soul
juego Paranormal Activity ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမှ မှုတ်သွင်းထားသည်။. ဇာတ်ကွက်သည် မူရင်းနှင့် ဝေးကွာသောကြောင့် (ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နတ်ဆိုးများနှင့် တစ္ဆေပုံပြင်များကို တွေ့ရသည်)၊ ၎င်း၏ အနုသယနှင့် ရစ်သမ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း "မှုတ်သွင်းခံရသည်" ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။ တစ်ခုခုဆိုပါက၊ ဂိမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြောက်လန့်ပြီး အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုထဲသို့ တွန်းပို့ရန် ၎င်း၏ကတိကို လိုက်နာပါသည်။
စွန့်စားမှု လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှုပ်ရှားမှု: The Lost Soul လူနေရပ်ကွက်ရှိ သာမာန်အိမ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ စင်္ကြံများနှင့် အခန်းများတွင် ဝှက်ထားသော နက်နဲသောအရာများနှင့် ပဟေဋ္ဌိများကို ဖြေရှင်းရန် တစ်နာရီ သို့မဟုတ် နှစ်နာရီအတွင်း အရာအားလုံးသည် ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ အမှောင်ထုသည် အသက်ရှုကြပ်နေပြီး အန္တရာယ်များသည် တံခါးတိုင်း၏နောက်ကွယ်တွင် သို့မဟုတ် မျှော်လင့်မထားသောထောင့်များတွင် ရှိနေသည်။
အားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လျှင် ဤအရာသည် အတော်လေးခိုင်မာသော VR ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံနှင့် အလင်းရောင်ကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အာရုံခံစားမှုနှင့် ထူထပ်သောလေထုကို ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှာ မြှင့်တင်နိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ PlayStation VR (PSVR) နှင့် Steam အတွက် PSN တွင် ရနိုင်သည်။
အာကာသနက်နဲသော အတုအယောင် လက်တွေ့တွင် ထိတ်လန့်စရာ
၎င်းသည် virtual reality ဂိမ်းမဟုတ်သော်လည်း၊ Alien VR မုဒ်- သီးခြားခွဲထားသည်။ ငါတို့ရဲ့စာရင်းကို လွတ်သွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဂန္ထဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထင်ကရ sci-fi ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင် franchise ကိုအခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်ကို သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ အနည်းဆုံး ယနေ့အထိ။
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်အတိုင်း၊ ဂိမ်း၏စက်ပြင်များသည် ကြောက်စရာကောင်းပြီး အန္တရာယ်ရှိသော xenomorphic သတ္တဝါများထံမှ ထွက်ပြေးခြင်းအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖူးရင် ရိုက်ချက်တွေက ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြေး၊ ပုန်း၊ မင်းရဲ့ အသက်ကို ထိန်းထား ... ကြောက်ရွံ့မှု ခံစားချက်က တုန်လှုပ်စရာကောင်းတယ်။
Blair Witch ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တောသို့ ပြန်သွားရန်
မထင်မှတ်ဘဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ Blair Witch ပရောဂျက် Virtual Reality ဗီဒီယိုဂိမ်းများကြောင့် (၁၉၉၉) နှစ်အကြာတွင် အနှစ် (၂၀) ​​တွင် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုနီဘလဲစုန်းမ ကစားသမားသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တောအုပ်ထဲတွင် နှစ်မြုပ်နေသော ပထမဆုံးလူ ထိတ်လန့်စရာ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီ- ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာရှိခွေး ကျည်ဓာတ်မီးနှင့် ဗီဒီယိုကင်မရာတို့၊
ဂိမ်းစက်အားလုံးနီးပါးတွင် ယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအလိုက် ကျွမ်းကျင်သူများကို ခေါ်ဝေါ်သည့် အကောင်းဆုံးဥပမာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်သန်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်း။ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်များအတွက်၊ ၎င်းသည် မေရီလန်းပြည်နယ် Burkittsville တောအုပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကလေးပျောက်ဆုံးမှုကို စုံစမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Blair Witch ၏ ထင်ရှားသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ကစားသမားအား အလှည့်ကျ အဆုံးသတ်များ ပေးဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်မှုကို စောင့်ဆိုင်းပြီး ငွိမျးစရာအဖြစ်သို့ မကျရောက်ဘဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ကစားနိုင်သည်။
ကျူးကျော်သူများ - ဝှက်။ ရှာပါ
စပိန်တံဆိပ်တုံးပါသော virtual reality ထိတ်လန့်စရာဂိမ်း
စပိန်မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဂိမ်းကို စာရင်းထဲ ထည့်ရတာ မျှတပါတယ်။ ကျူးကျော်သူများ - ဝှက်။ ရှာပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် "ကြောက်စရာများ" တို့ကြောင့် မကြာခဏ မေ့လျော့လွန်းသည့် အသေးစိတ်အချက်များနှင့် ခိုင်မာသောဇာတ်ကွက်များကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစွာ ပုံဖော်ထားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇာတ်လမ်းသည် အမျိုးအစားထဲတွင် အတော်လေး ဂန္တဝင်ဖြစ်သည်- အိမ်တစ်အိမ်သို့ မိသားစုလိုက်သွားသည့် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုအဖြစ် အဆုံးသတ်သွားသည့် နိုင်ငံ။ အိမ်သည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဝေးကွာသော နေရာ၏ အလယ်တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဝေးလံခေါင်သီသောနေရာသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ရာဇ၀တ်ကောင်သုံးဦး၏ ဝိုင်းရံခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သာမန်ရာဇ၀တ်မှုအကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ ဤအကြမ်းဖက်မှုအားလုံး၏နောက်ကွယ်တွင် ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော စကားဝှက်တစ်ခုရှိသည်။
virtual reality ၏အံ့ဖွယ်အမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသား၌ ခံစားမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟူသော အိမ်၏လေထုသည် သည်းမခံနိုင်သောတင်းမာမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။ နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏ ခံစားချက်သည် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးက ဖြစ်တာ။ ကျူးကျော်သူများ - ဝှက်။ ရှာပါ ထိတ်လန့်ချစ်သူများအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ထက်ပိုသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
Resident EVil 7- Biohazard သည် အကောင်းဆုံး VR ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းများစာရင်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်
လူအများ၏အမြင်အရ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် အကောင်းဆုံး VR ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အော်ဟစ်ခြင်းနှင့် ကြောက်လန့်ခြင်းတို့ကို ကျော်လွန်ခြင်း၊ Resident Evil 7: Biohazard virtual reality နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်နှင့် အအောင်မြင်ဆုံး အတွေ့အကြုံများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ပါသည်။
ကစားသမားသည် ပျောက်ဆုံးသွားသော သမီးဖြစ်သူ Mia ကိုရှာဖွေရာ Ethan Winters ၏ ဖိနပ်ကိုစီးကာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ညစ်ညမ်းသော စိမ့်ကန်ဘေးရှိ စွန့်ပစ်ထားသော အိမ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက မဖြစ်နိုင်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေ ရှိတဲ့ သတ္တဝါကြီးတွေ နေထိုင်ရာ နေရာပါ။
Resident Evil saga ပရိသတ်များသည် တတိယလူတွင် ကစားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဗားရှင်းအတွက် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်သည် ကြီးမားသောသွေဖည်မှု၊ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသို့ဖြစ်လင့်ကစား၊ လေသံနှင့် ရစ်သမ်နှင့် ဂိမ်းကစားနည်း နှစ်ခုစလုံးသည် franchise ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် မှန်ကန်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ငြင်းခုံမှုမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အရာအားလုံး အဆင်ပြေစေပါသည်။ အတိအကျပြောရရင် Resident Evil 7: Biohazard အစုံပါပဲ။ Survival Horror ဂိမ်းများတွင် မှတ်တိုင်အသစ်။
The Exorcist- Legion သည် အကောင်းဆုံး VR ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
ယနေ့အထိ ဖန်တီးထားသည့် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး virtual reality ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ကို သံသယမရှိဘဲ။ ဂရန် Exorcist: Legion ကစားသမားသည် ဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ခုတွင် ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အဖြေများကိုရှာဖွေရာတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ၏အခန်းကဏ္ဍကို ကစားသမားက တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ဟောလိဝုဒ်ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်များနဲ့ ထိုက်တန်သော နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်တစ်ခုတွင် ဂိမ်းသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အပိုင်းများကို ဆက်တိုက်ဖြတ်ကာ ဂိမ်းကို ဆက်လုပ်နေသည်။
Exorcist VR ၏ အထူးခြားဆုံး ရှုထောင့်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ ကောင်းမွန်သော အသံဒီဇိုင်း ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားသည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်းမှထွက်လာပုံရပြီး အစွမ်းထက်သော 3D spatial အသံကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝန်းရံထားသည့်အသံများကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားနိုင်သည်။ ညည်းညူသံများ၊ ကျယ်လောင်စွာအော်သံများနှင့် အခြားကြောက်မက်ဖွယ်ရာအသံများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်လာမည့်အရာများကို သတိပေးချက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။
ဤဂိမ်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သည့် VR စွန့်စားခန်းသည် တင်းမာသောအခိုက်အတန့်များနှင့် အေးမြသောမြင်ကွင်းများဖြင့် ပြည့်နေသည်။ ၎င်း၏ကြာချိန်သည် တိုတောင်းသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်သည့် အတွေ့အကြုံသည် ပြင်းထန်သည်။
Walking Dead - သူတော်စင်များနှင့် အပြစ်သားများ
The Walking Dead - Saints & Sinners တွင် ယခင်ကထက် ပိုမို၍ စစ်မှန်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော ဖုတ်ကောင်များ
Zombies များသည် consoles အတွက် virtual reality ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး ကြောက်စရာများစာရင်းမှ မလွတ်ကင်းနိုင်ပါ။ The Walking Dead: သူတော်စင်များနှင့်အပြစ်သားများ လူကြိုက်များသော တီဗီစီးရီးမှ လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ဤဇာတ်လမ်းအတွက် လှည့်ကွက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောရမလဲ။ ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်သည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံသည် ရိုးရှင်းပါသည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းကို ကောင်းစွာလူသိများသည်- ၎င်းတွင် လမ်းလျှောက်သူများကို ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးမှ ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားသော်လည်း လိုအပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့ကို တိုက်ခိုက်ရန် ပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာ အခြားလူနည်းစုကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ရှင်သန်မှုစွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ​သွေး​တွေ ​သွေး​တွေ အများကြီးနဲ့။ VR ဗားရှင်းတွင်၊ အန္တရာယ်နှင့် ထိတ်လန့်သည့်ခံစားချက် တိုးလာကာ ကစားသမားအား အမြဲတမ်းသတိပေးနေသည့်အခြေအနေတွင် ရှိနေစေခဲ့သည်။
အရုဏ်အထိ: သွေး၏ Rush
မင်းတကယ်ကြောက်ချင်နေတာလား။ Until Dawn: Blood Rush ကစားဝံ့ပါ။
PS4 တွင် ရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သလို တကယ့်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျဗားရှင်းနဲ့ ဂိမ်းကို သိပြီးသားသူတွေအတွက်၊ အရုဏ်အထိ: သွေး၏ Rush ဇာတ်ကွက်နှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းများကို မဖော်ပြပါ။ သို့သော် ယခု VR ဗားရှင်းတွင် လက်တွေ့ဆန်သောခံစားချက်သည် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်သံသည် တစ်ထောင်သို့မရောက်ဘဲ ခဏတာကစားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဂိမ်းအပြည့်အစုံကို အပြီးသတ်ရန် ၃ နာရီခန့် ကြာသည်။ နည်းနည်းအရသာရှိလား။ တစ်ခုထက်ပိုသည်က နှလုံးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမညီမျှမှုတစ်မျိုးမျိုးကို ခံစားရပြီး အဆုံးသတ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် အလွန်များသည်ဟုပင် ထင်ရပါလိမ့်မည်။
ချဲ့ကားခြင်းဘေးမှ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Rush of Blood ၏ သီလများစွာကို မီးမောင်းထိုးပြရမည်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းတွင် ထူးခြားသည့် ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးနှင့် သင့်ဆံပင်ကို အဆုံးထိ ရပ်တည်စေသည့် ပတ်၀န်းကျင်အသံများ ပါရှိသည်။ ဇာတ်လမ်းသည် မူရင်းဂိမ်းအပေါ် အခြေခံထားခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ စမ်းကြည့်ဖို့ သတ္တိရှိလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ကွန်ဆိုးလ်များတွင် ပျော်ရွှင်ရန် Horror VR ဂိမ်းများ
သင့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် 2021 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပေါ့တ်ကာစ်များ
PC နှင့် Android အတွက် Nintendo Switch emulators